Trump oo ka hadlay ninkii madowga ahaa ee lagu dilay Minneopolis
May 28, 2020 Mahad Jama 4
LONDON(P-TIMES)- Madaxweyanaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa naxdin iyo masiibo ku tilmaamay dilkii magaalada Minneopolis uu ugu gaystay mid kamid ah saraakiisha ciidamada Booliska magaaladaasi nin madow ah oo lagu magacaabi jiray George Floyd.
Trump ayaa waxa uu ka codsaday hay’adda FBI-da iyo waaxda caddaalada Maraykanka in talaabo ay qaadaan marka ay soo af jaraan baadhitaanada ku saabsan dhacdadaasi dilka ah.
Sidoo kale waxa uu u tacsiyeeyey qoyska iyo eheleada George Floyd oo ahaa ninkii lagu dilay magaalada Minneapolis, isagoona ka hadlayey dhacdadii lagu dilay ninkaasi iyo hanaanka ay u socdaan baadhitaanadu waxa uu yidhi Mr. Trump “Sida aan ka codsaday FBI-da iyo waaxda caddaalada waxay si wanaagsan u wadaan baadhitaanada dhacdadan naxdinta badan ee masiibada ah ee dilkii Minnesota loogu gaystay George Floyd. waxaan ka codsaday baadhitaanada kadib in baadhitaano la qaado, waxaan si aad ugu mahad celinayaa ha’yadaha sharciga ee maxaliga ah shaqada ay qabteen caddaalada waa inay dhaqan gashaa”.
Dilkii ninkan madowga ah ayaa sababay kacdoon culus, waxaana shaqada laga eryey ninkii la sheegay in uu dilay iyo labo sarkaal oo kale, waxaana dowladda laga codsaday in ay cadaalada hor keento ragii ka dambeeyey dilkiisa.
Wakaas sababta aan trump u taageero .
Somali maryooley iyo intii madowba ordahayoo u niikiya Democratka.
Inan gumeed kama daba haro Kan awowoowayaashiis gumeysan jirey.
Somalidu waa gunta ugu liidata abkay inan gummed oo dhan oo isu haysata in ay gob yihiin.
War maanta maxaa si kaa ah waad roonaan jirtee?Soomaali waxay tahayba waad la tahay ee saas ku talo gal.
Hadalka uu Taraam yiri oo ah hala soo baaro kiiska G.Flyod waa sax,laakiin saddexdaas nin waa dambiilayaal an shaki ku jirin.Ma shaki baa ku jira in ay nimankaasu yahiin (gacan ku dhiiglayaal) bareer u dilay George Floyd.Si ula kac ah bay u dileen George.Maadaama uu ninkaasu gacamaha ka jeebaysnaa waxay ahayd in ay sidaas ku geeyaan station-ka booliska oo la waraysto.George Flyod cidna ma dilin hubna ma haysan baa la yiri.Saas darteed ma uu mudnayn in saas loola macabiltamo.
Brother waa runtaa oo Somali waxay tahay ayaan la ahay oo waxay qabaan ayaan la qabin. Fiqi tolkiis kama jana tago. Run ahaantii waan isku ayey in aan is isir badalo laakiin waxaan xaqiiqsaday in abuurid Alle la badali Karin. Markaasaan go’aansaday sidii gaaladii in aan iraahdo “if you can’t beat them join them” oo noqday mooryaan somali.
Laakiin run ahaantii qofkii damiir leh wey ku adagtahay ahaanshaha somalinimada. Waayo dameer kasta iyo daanyeer kasta ayaa intuu wuxuushnimo ku kaco hadana ku faanaya in uu Somali yahay. Bal muu yiraahdo xabash baan ahay markuu ku kacayo falxumada.
Tankale Donald tramp ficilkuu ku kacay wax la mid ah majiraan. Si barer ah ayuu u cambaareyey wuxuushtii ninka dishay isagoo cidna uga hibeysanahayn. Obama iyo democrateka kale sariirta hoosteeda ayey gali lahaayeen. Somalidu ma yaqaanaan nacabkood waana sababta aan afka ugu duftay.